बिदेशबाट पहिलो चरणमा स्वदेश ल्याइनेहरूकाे तथ्याङ्क सार्वजनिक, कुनदेशबाट कति आउँदैछन? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > बिदेशबाट पहिलो चरणमा स्वदेश ल्याइनेहरूकाे तथ्याङ्क सार्वजनिक, कुनदेशबाट कति आउँदैछन? हेर्नुस्
सरकारले विदेशबाट पहिलो चरणमा स्वदेश ल्याउनुपर्ने नागरिकको तथ्याङ्क भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । गत शुक्रबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र म्यानमारबाट कोरोनाका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन थाले पनि पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्नेको तथ्याङ्क सोमबार मात्रै बाहिर ल्याएको छ ।
गएको शुक्रबार यूएईबाट १६८ जना र म्यानमारबाट २६ जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । यो खबर आजको गोररखापत्र दैनिकमा छ ।
प्रहरीप्रतिको विश्वासमा धावा बोल्ने प्रबृत्तिले जाजरकोट घटना प्रभावित हुनसक्ने! प्रहरी माथिकाे विश्वास खै?
मकुनाको रहस्यमय मृ’त्यु, करेन्ट लगाएको आशंका